अधिबक्ता शितल सर्वोकृष्ट सांगितिक बिधामा मनोनयन-NepalKanoon.com
अधिबक्ता शितल सर्वोकृष्ट सांगितिक बिधामा मनोनयन
भदौ २१, काठमाण्डौ । शितल पाण्डे कानून ब्यवसायको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकी युवा कानून ब्यवसायी हुन । उनि अदालतमा मुद्दाका पक्षमा कानूनका ब्यवस्था र प्रमाणको संयोजन मिलाउदै वहस मात्र गर्ने होइन संचार माध्यम, मोवाइल, र विभिन्न गित संगित धन्काउने माध्यममा पनि सुरिला भाका मार्फत मनोरन्जन प्रदान गराउदै आएकि छिन ।
यहि भाद्र २८ गते आयोजना हुन गहिरहेको म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड २०१५ मा डा. कृष्णहरि बराल को शब्दमा रहेको नहुने पो हो कि यो सपना पुरा…… गीतमा शितल पान्डे सर्वोकृष्ट नव प्रतिभा सुगम सांगितिक बिधामा मनोनयनमा परेको छ ।
सम्पूर्ण कानून ब्यवसायी साथिहरुले अरुको भन्दा विषेस सहयोग भोट मार्फत गर्नुहुने छ भन्ने अपेक्षा गरेको शितलले नेपाल कानून संग वताइन ।
नोट भोटिङ मोबाईलको SMS box मा गई MKA <space> 100 टाइप गरी ४२४३ मा पठाउनु होला ।
नोमिनेसनमा परेको गित सुन्न याहाँ क्लिक गर्नुहोला !!